गर्मीमा ध्यान दिनै पर्ने ७ कुरा - Nepali Virals
८ चैत्र २०७२, सोमबार ११:१७	466 पटक-पढिएको
नेपालमा गर्मी ह्वात्तै बढेको छ । जाडोमा भन्दा गर्मीमा बिभिन्न रोगहरुको संक्रमण बढी हुन्छ । यसका साथै गर्मी मौसममा खाना नरुच्ने र आलस्यता बढ्ने भएकाले काम गर्ने जागर घट्न सक्छ । यसका साथै टिनेज युवापुस्ताहरुले आफ्नो स्मार्ट/ब्युटी जोगाउनका लागि अलि धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सानोतिनो कमजोरी र हेलचेक्राइले पनि तपाइको ब्युटीपन र स्मार्टपनमा आंच आउँ सक्छ तसर्थ यो गर्मी मौसममा यी १० कुरामा ध्यान दिन जरुरि छ ।
१. सनप्रुफ आइज
गर्मीमा छालाको विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ । गर्मीमा सूर्यको सीधा सम्पर्कमा आउँदा छाला डढ्न सक्छ । घामले डढेको छाला चमक हराएर कालो देखिन्छ । सम्भव भएसम्म १० देखि ३ बजेको घाममा बाहिर निस्कनुहुँदैन। बाहिर जानुभन्दा एक घन्टा पहिले अनुहार तथा शरीरको खुला भागमा एसपीएफ ३० युक्त सनस्त्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सूर्यको हानिकारक किरणबाट आँखालाई बचाउन घरबाहिर निस्कँदा युवी प्रोटेक्टिभ सनग्लास प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले आँखामा आउने रंकल अर्थात् चाउरीलाई पनि कम गर्छ ।
२. केशको ख्याल
गर्मीमा पसिना तथा घामले केश छिट्टै मैलो हुन्छ । त्यसैले हप्तामा कम्तीमा तीन पटक स्याम्पुले केश धुनुपर्छ । सनस्त्रिमयुक्त्त कन्डिसनर प्रयोग गर्नुपर्छ । गर्मीमा कुनै पनि प्रकारको केमिकल ट्रिटमेन्ट, पम्पिङ, स्ट्रेट आदि गर्नु राम्रो मानिँदैन ’cause त्यसले केश सुख्खा हुन्छ।
३. खुट्टाको हेरचाह
गर्मीमा पसिनाले खुट्टा गन्हाउने समस्या बढ्छ । यसबाट बच्न समय/समयमा खुट्टा खुल्ला राख्नुपर्छ । साथै हल्का पाउडर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी नियमित रूपमा पेडिक्योर गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
४. डाइटमा ध्यान
गर्मीमा हल्का वा छिटो पच्ने खाद्यपदार्थ सेवन गर्नुपर्छ । धेरै तेल तथा मसलायुक्त खानेकुरा खानु हुदैन। प्रशस्त मात्रामा पानी, नरिवल पानी तथा काँक्रा सेवन गर्नुपर्छ । फलफूल तथा सागसब्जी काटेपछि त्यसलाई तुरुन्त प्रयोग गर्नुपर्छ। काटेर धेरै समय राखेको सागसब्जी तथा फलफूलमा भिटामिन नष्ट हुन्छ। कुनै पनि फलफूल तथा सलाद खानुभन्दा पहिले राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ ।
ताजा खाना खानुपर्छ र स्वस्थ रहनुपर्छ। गर्मीमा तुरुन्त पकाएको भोजन खानुपर्छ। कारण गर्मीमा टमाटर, आलु, हरियो सागपात र दाल चाँडै खराब हुन्छन्। सुपाच्य भोजन गर्नुपर्छ, गरिष्ठ भोजनबाट टाढै रहनुपर्छ। डाइटमा सुप, सलाद र फल खानुपर्छ। मसलेदार खाना कम खानुपर्छ। एकसाथ तीनभन्दा बढी फलको मिक्स जुस पिउनु हुँदैन। डिब्बाबन्द जुसबाट जोगिनुपर्छ। ताजा फलको जुसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
बिहान उठेपछि एक–डेढ घन्टाभित्र केही न केही खानुपर्छ वा ग्रीन टी सेवन गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म खाली पेट रहनाले शरीरमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी हुन पुग्छ। थोरै–थोरै समयको अन्तरालमा खाए ओवर इटिङबाट जोगिन सकिन्छ। बिहानीको सुरुवात मन तातोपानीमा कागतीको रस र मह हालेर पिउनु फाइदाजनक हुन्छ।
गर्मीमा चिया–कफीको सेवन कम गर्नुपर्छ। कफीले शरीरमा डिहाइड्रेसन बढाउँछ। जुस, दही, लस्सी, मोही, सातु, कागती–पानी बेलको सर्बत, नरिवलको पानी एवं उखुको रस आदिलाई आफ्नो डाइटमा समावेश गर्नु लाभदायक हुन्छ। घरमा ग्लुकोज, जीवनजल, पुदिना आदि राख्नुपर्छ । घामबाट फर्किएपछि तुरुन्तै फ्रिजको पानी पिउनु हुँदैन। त्यसको साटो सुराही वा माटाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ । मिठाईं खाने मन भए स्याउ, अमला, बेल वा पेठा खान सकिन्छ । अत्यधिक चिसो पेय पदार्थबाट टाढै रहनुपर्छ।
सुपाच्य र हल्का तरकारी खानुपर्छ। गाजर, टमाटर, पालकबाहेक पानी प्रशस्त भएका लौका आदिको तरकारी उपयुक्त हुन्छ। यिनमा लो क्यालोरी हुनुका साथै गर्मीसित लड्ने क्षमता पनि हुन्छ।
गर्मीमा पसिनाले शरीर गन्हाउँछ। यसबाट बच्न दिनमा दुईपटक नुहाउनुपर्छ । नुहाउँदा माइल्ड परफ्युम अथवा एन्टिसेप्टिक सोप प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैगरी काखीको गन्ध हटाउन रोल अन डियो प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
६. गर्मी सुहाउदो पहिरन
गर्मीबाट बच्न उपयुक्त पहिरन लगाउनुपर्छ । गर्मीमा लायक्रा तथा सिन्थेटिक पहिरनबाट टाढै रहनुपर्छ । सेतो, लाइट अथवा पेस्टल सेड्स कटन ड्रेस प्रयोग गर्नुपर्छ । धेरै फिटिङ भएका पहिरन प्रयोग गर्नुहुँदैन । घामबाट जोगिन पूरा बाहुला भएका पहिरन तथा ह्याट प्रयोग गर्नुपर्छ ।
७. मेकअपमा ख्याल
गर्मीका लागि ब्युटी टिप्स गर्मीमा पसिना धेरै आउने हुनाले मेकअप रुटिन बदल्नुपर्छ । गर्मीमा हल्का मेकअप गर्नुपर्छ । हेभी मेकअप पसिनासँगै बगेर जान्छ र अनुहार विकृत देखिन सक्छ । मेकअप गर्दा चिल्लोरहित तथा वाटरप्रुफ मेकअप प्रोडक्ट्स प्रयोग गर्नुपर्छ । फाउन्डेसन लगाउँदा स्पन्ज प्रयोग गर्नुपर्छ । हातले फाउन्डेसन लगाउनुहुँदैन । गर्मीमा गाजलको सट्टा हाई वेक्सयुक्त आई पेन्सिल प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अघिल्लो संगत गर्न नहुने ८ प्रकारका मानिस
पछिल्लो भारतीय रुपैया अब अनलाइनबाटै डाउनलोड !